Cabdirisaaq Macalin Cilmi: Taariikhda shariif cabdinuur oo kooban.
Sh Shariif Cabdi Nuur wuxuu markaa galay jaamacaddii AZHAR, Kuliyadda Shareecaddaiyo Qaanuunka. Waxa uu dhammaystirtay aqoontiisa jaamacadeed. Kadib wuxuu u gudbay jaamacadda isagga oo ka gaadhay Usuulu fiqigga halka ugu sareysa ee Maanjisteer. Maadaama uu soo dhammaystay aqoontiisii, waxa uu aqoonyahanku ku noqday wadankii Soomaaliya.
Culimada Soomaalida ugu waaweyn ee maanta nool waxay qireen in cid maanta ka cilmi badan aduunka oo nool aanay jirin inta ogaalkooda ah.
FG:Qoraalkani waa in kooban oo aan ka soo qadanay qormo uu waa hore qoray
Guuleed maxamed yaasiin dalxa.